အိမ်မှာ ဆေးခြောက်စိုက်တဲ့ ရုရှားနှစ်ဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲ ဖမ်းဆီး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း အိမ်မှာ ဆေးခြောက်စိုက်တဲ့ ရုရှားနှစ်ဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲ ဖမ်းဆီး
အိမ်မှာ ဆေးခြောက်စိုက်တဲ့ ရုရှားနှစ်ဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲ ဖမ်းဆီး
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်း၊ ဂျင်ဘာရန်ရှိ ငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်မှာ တရားမဝင် ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးပြီး ရောင်းချမှုနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
လူရီ ချေနော့ဗ်နဲ့ မီရှယ် ကဗာရာ တက်ခေလီယာတို့ကို အပင်တွေအတွက် အာဟာရလိုအပ်ချက် ပြည့်စုံအပေါ် အလေးပေးပြီး မြေဆီလွှာကို မသုံးဘဲရေကို အသုံးပြု. စိုက်ပျိုးနည်းဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဒရိုပိုနစ် နည်းနဲ့ ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ရူဒီ ဆီတီယဝမ်က ပြောပါတယ်။
ခွနေော့ဗနြဲ့ တကခြလေီယာတို့ဟာ အဲဒီအိမမြှာ ငှားနတော နှဈနှဈ ကှာပှီဖှဈကှောငြး၊ ဇနနြဝါရီလ ၂၂ ရကနြေ့က သူတို့ကို ဖမြးဆီးခဲ့တာ ဖှဈပှီး ဆေးခှောကြ ၇၁၀ ဂရမပြါ ဖနဗြူး ခှောကဗြူးနဲ့ ဆေးခှောကြ မွိုးစေ့ပါ အိုး ၁၄ လုံးတို့ကိုလညြး သိမြးဆညြး ရမိခဲ့ပါတယြ။ အငဒြိုနီးရှား ဥပဒအရေ ရုရှားစုံတှဲဟာ ပှဈမှုထငရြှားရငြ ထောငဒြဏြ ၁၂ နှဈနဲ့ ငှဒဏေအြဖှဈ အမရေိကနဒြေါလြာ ၅ သိနြး ၈ သောငြးနဲ့ ညီမွှတဲ့ အငဒြိုနီးရှား ရူပီး ပေးဆောငရြမှာ ဖှဈပါတယြ။
အိမျမှာ ဆေးခွောကျစိုကျတဲ့ ရုရှားနှဈဦးကို အငျဒိုနီးရှားရဲ ဖမျးဆီး
လူရီ ချေနော့ဗ်နဲ့ မီရှယ် ကဗာရာ တက်ခေလီယာတို့ကို အပင်တွေအတွက် အာဟာရလိုအပ်ချက် ပြည့်စုံအပေါ် အလေးပေးပြီး မြေဆီလွှာကို မသုံးဘဲရေကို အသုံးပြု. စိုက်ပျိုးနည်းဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဒရိုပိုနစ် နည်းနဲ့ ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ရူဒီ ဆီတီယဝမ်က ပြောပါတယ်။ချေနော့ဗ်နဲ့ တက်ခေလီယာတို့ဟာ အဲဒီအိမ်မှာ ငှားနေတာ နှစ်နှစ် ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က သူတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဆေးခြောက် ၇၁၀ ဂရမ်ပါ ဖန်ဗူး ခြောက်ဗူးနဲ့ ဆေးခြောက် မျိုးစေ့ပါ အိုး ၁၄ လုံးတို့ကိုလည်း သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား ဥပဒေအရ ရုရှားစုံတွဲဟာ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်နဲ့ ငွေဒဏ်အဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သိန်း ၈ သောင်းနဲ့ ညီမျှတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ရူပီး ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleဆန္ဒပြ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ လို
Next articleMCN INTERNATIONAL NEWS BULLETIN (28 JAN 2020)